Ndụmọdụ Nchebe Kọmputa maka Onye Ọ Bụla Oge Ọ Bụla | Site na Linux
Linux Post Wụnye | | Ndị ọzọ, ọtụtụ
Na nke a, anyị ga-ekwupụta ụfọdụ bara uru «Consejos de Seguridad Informática» maka mmadu niile, itinye n'ọrụ n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla n'ime ndụ anyị, ma ọ bụ nke onwe ma ọ bụ nke ọrụ.
Ka anyị cheta na ọtụtụ oge, ma ọ bụ n'ụlọ, n'okporo ámá ma ọ bụ ọrụ, Anyị na-ejikarị aha arụpụta ma ọ bụ nkasi obi, na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-eme omume ndị na-adabaghị na omume ọma banyere «Seguridad Informática», nke n'ikpeazụ, mgbe ahụ nwere ike ịkpata nsogbu ka ukwuu ma ọ bụ ụgwọ maka onwe ha ma ọ bụ ndị ọzọ.
Otú ọ dị, ọ bụ kpomkwem mwekota nke ihe ndị dị mkpa ma dị mkpa nke «Seguridad Informática» na omume anyị, nke onwe na nke ọrụ, otu n'ime ụzọ kacha mma melite anyị «productividad» onwe ma ọ bụ dị ka ndị ọrụ, ma ọ bụ site na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị ebe anyị na-arụ ọrụ.
Ndụmọdụ, ndụmọdụ, usoro ma ọ bụ usoro, nke nwere ike ịbụ naanị iji ma ọ bụ tụfuo ụfọdụ ngwa iji hụ na ndị ọrụ nwere nchekwa site na «Seguridad Informática» emejuputa otu esi aru oru ha.
1 Ndụmọdụ Nchedo Kọmputa
1.1 Dị Oké Mkpa
1.1.1 Belata ọnụọgụ nchekwa
1.1.2 Machiini niile nche usoro
1.1.3 Jiri njikọ ịntanetị dị mma
1.1.4 Na-ahọrọ iji VPNs
1.1.5 Nwee atụmatụ ndabere ma ọ bụ nkwenye
1.1.6 Jiri usoro nyocha abuo
1.1.7 Debe ngwanrọ ngwanrọ emelitere
Ndụmọdụ Nchedo Kọmputa
Dị Oké Mkpa
Belata ọnụọgụ nchekwa
Chọpụta n’oge ma belata ọnụ ọgụgụ nke mmebi «Seguridad Informática» kedu ihe anyị ga-emeỌ nwere ike iri anyị oge dị ukwuu, dabere na ihe ndị anyị chọrọ iji mejuputa, mana ha nwere ike ịchekwa anyị ogologo oge ogologo oge, n'ihi na kama itinye oge iji dozie nsogbu ndị e gosipụtara, anyị na-etinye ya na-egbochi ime ha.
Ọbụna na-ezere nsonaazụ ndị metụtara ya «incidentes informáticos», dị ka ime ka ndị mmadụ mara ya na iwu, ndị ahịa nwere ike ịnwụ, na iweda mmụọ ọrụ ala. Ezigbo atụmatụ «Seguridad Cibernética» na-ekwe nkwa na nke a anaghị eme.
Machiini niile nche usoro
Akpaaka na-abụkarị otu ihe ka ịdị mfe. Ma dị mfe usoro metụtara «Seguridad Informática» N'ime ihe omume anyị ma ọ bụ ọrụ anyị, zere ọrụ ugboro ugboro nke nwere ike ịdaba na ọdịda mmadụ.
Dịka ọmụmaatụ, ojiji nke «tecnologías RFID» ma obu nke «escáneres biológicos»dị ka «lectores de huellas digitales», nwere ike ịkwado ma melite nnweta ebe dị nro n'ime akụrụngwa n'ụzọ dị nchebe karị. Nke na-egbochi igbu oge ma na-eweta mmụba na nrụpụta nke onwe na izugbe. Ma ọ bụ na-akpaghị aka «acceso remoto» na kọmputa ụfọdụ ma ọ bụ ihe ndekọ ederede dị n'ime ha, ọ ga-egbochi mmadụ ịnọ n'ụzọ ahụ ma ọ bụ nye ndị ọzọ okwuntughe na koodu nnweta nzuzo.
Jiri njikọ ịntanetị dị mma
N'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs, ohere zuru ezu na «Internet», na-enye ohere inweta ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị arụpụta ma ọ bụ enweghị nchekwa, n’ime oge ndị na-arụpụta ọrụ nke ndị nile nwere ike ịbanye na ya, nke pụtara ụzọ ma ọ bụ usoro nke imefusị ọtụtụ awa nke ịmị mkpụrụ.
N'ihi ya, na-egbochi ịnweta saịtị ụfọdụ na-emegharị anya, dịka saịtị mgbasa ozi, netwọkụ mmekọrịta, ma ọ bụ ọtụtụ ọdịnaya ọdịnaya (egwu, ihe nkiri, vidiyo, na ndị ọzọ) nwere ike inye aka chekwaa nnukwu ego «horas de tiempo productivas» nke onwe ma ọ bụ nke onye ọrụ, nke a ga-etinye n'ime awa na-arụpụta ihe. Na mgbakwunye na mma iji «ancho de banda» dịnụ.
Na-ahọrọ iji VPNs
The decentralization nke-arụsi ọrụ ike bụ ugbu a zuru ụwa ọnụ na-emekarị, na «Teletrabajo» ọ bụ a booming ejiji. Na mgbakwunye, iji pasent na-eto eto nke ndị ọrụ si mba ọzọ pụrụ iche iji mepụta ọrụ dịpụrụ adịpụ site na ndị ọzọ.
Ma, ojiji nke «VPNs» na-enye ohere ka ọtụtụ mmadụ rụọ ọrụ n’enweghị nsogbu ọ bụla maka mmadụ ọ bụla, ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ, ọha ma ọ bụ nkeonwe. N'ụzọ dị otú a, na a «VPN» na-enye ohere ịnweta ihe nke atọ na ụzọ bara oke uru.
Nwee atụmatụ ndabere ma ọ bụ nkwenye
Onye ọ bụla, ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ ọ bụla ga-enwerịrị data dị mkpa maka ọrụ ha nke ọma, nke doro anya na ha ga-etinye ya n'ọrụ «copias de seguridad» ka e chebe ya. Na ndị mmadụ nwere ike ịnweta ya, ebe nchekwa na ijikọ ya na igwe ojii ahụ, a ga-etinyerịrị ihe ndị dị mkpa iji kwado nkwa kacha mma na nkọwapụta nke nnweta na ikike na data dị mkpa kwuru ka enweghị ohere ghara ime. chọrọ.
una «perdida de datos»Ọ bụghị naanị na ọ pụtara oge arụpụtaghị ihe, kamakwa ọnwụ nke ego, aha ọma na ọbụlagodi ndị ahịa. Ọ bụ ya mere nkwado ndabere dị irè na atụmatụ mgbake ọdachi na-enyere aka ịnọgide na-enwe «operatividad de las operaciones» ma zere nsonaazụ ọjọọ nke ọdịda dị otú ahụ.
Jiri usoro nyocha abuo
Jiri dị ka usoro nke «Seguridad Informática» na nkà na ụzụ nke «Autenticación de dos factores (2FA)», na nke anyị ma ọ bụ ndị ọzọ ', nke onwe, nke ọkachamara ma ọ bụ nke ọrụ bụ usoro dị mma, ebe ọ na-agbakwunye nkwupụta nkwado ọzọ, ya bụ, ọ na-etinye na ndị ọrụ kwesịrị ịme ihe ọzọ iji gosipụta njirimara ha tupu ha enwee ike ịnweta.
Site na otu emejuputara, onye ọrụ choro inweta a «token one0time» na gị onwe gị ma ọ bụ ụlọọrụ ekwentị, nke ị kwesịrị ịtinye site na nyocha ngwa ma ọ bụ interface iji nweta ohere ejiri n'aka. Nkà na ụzụ a na-agbakwunye a «capa adicional de seguridad» siri ike na mmekọrịta nke ndị ọzọ. Emejuputara nke ọma, ọ na - egbochi ịnweta ụzọ dị mkpa na ozi nzuzo, na - azọpụta isi ọwụwa site na nsonaazụ n'ọdịnihu «violaciones de seguridad».
Debe ngwanrọ ngwanrọ emelitere
Iji mee ka onye si mba ọzọ ma ọ bụ onye ọrụ na-enwetaghị ikike nweta data ma ọ bụ ozi dị mkpa ma dị nzuzo, ha ga-ebu ụzọ chọta «vulnerabilidad» nke ahụ nwere ike ịgbawa iji banye penetration. Na kpomkwem ndị ọma a na-adịkarị mfe ịchọta na nsụgharị ochie nke ngwaahịa sọftụwia eji. Ebe ọ bụ naanị nsụgharị ndị kachasị ọhụrụ bụ ndị ahụrụ njehie ka emeziri.
Nke a metụtara karịsịa «Sistemas Operativos» na mmemme ma ọ bụ ihe owuwu dị oke mkpa maka nzukọ ma ọ bụ ndị ọrụ. Ezigbo ihe atụ bụ «Servidores web» nke kwesịrị ịnwa ịnwe nsụgharị ndị ọhụrụ na mmelite nke ngwanrọ eji, ebe ọ bụ na ha na-abụkarị otu ebumnuche mbụ nke ndị na-eme omume dị otú ahụ ga-awakpo. N'ihi ya, ọ dịghị ihe dị mma karịa inwe obi ike ma jide n'aka na a ga-ebelata ma ọ bụ kpochapụ oghere oghere ọ bụla nwere ike n'ime sistemụ anyị.
Jiri okwuntughe siri ike (siri ike) ma megharịa ha kwa oge iji gbochie ha ịmegharị ngwa ngwa. Zere otu aha njirimara na paswọọdụ maka ọtụtụ ọrụ.
Jiri antivirus kacha mma na mmelite ya kachasị ọhụrụ.
Mejuputa ezigbo firewall iji kpuchido nnweta na netwọk nkeonwe ma zoo ozi ezigara na netwọk ahụ.
Mee ka njikọ WiFi sie ike na okwuntughe siri ike, SSID zoro ezo, nke MACs dechara ma jiri otu maka ojiji nkeonwe na nke ọzọ maka iji ọha na eze. Ma megharia okwuntughe site n'oge ruo n'oge iji gbochie ha ịmegharị ngwa ngwa.
Zere ijikọ ngwaọrụ nkeonwe anyị ma ọ bụ nke ọrụ iji mepee netwọkụ iji zere ọrịa, na karịa ihe niile iji rụọ ọrụ ndị na-adịghị mma, dịka ichekwa ego na bank ma ọ bụ nke azụmahịa, na ha. Naanị rụọ ụdị ọrụ a site na saịtị echedoro ma kwenye.
Zere ka ị na-eleta ma ọ bụ wụnye ihe omume site na isi mmalite ma ọ bụ nke enyo.
Hazi akpaaka igbochi na dị ka ngwa ngwa dị ka o kwere nke anyị ngwaọrụ.
Ziga obere ozi dị ka o kwere mee na netwọk mmekọrịta, karịsịa ọrụ.
Ejikọla ngwaọrụ ndị dị na mpụga site na storages a na-amaghị ama na ngwaọrụ anyị, na-enweghị nchekwa nchekwa dị mkpa, dị ka iji antivirus na ha tupu ịnweta ha, na iwepu igbu akpaaka (CD / DVD / USB).
Jiri otu ma ọ bụ karịa tụkwasịrị obi ma dokwaa ISP iji debe ihe niile na nchekwa.
Zere ọnwụ nke ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ ejichi ha ruo ogologo oge, iji zere ikpughe ozi dị nro.
Kpachara anya ibudata ma mechie mgbakwunye ọ bụla na ozi ịntanetị anyị. Karịsịa ndị nwere aha mara mma ma ọ bụ nke ejiji.
Pụpụ, kpọchie ma gbanyụọ akụrụngwa dị mkpa iji zere mbata na-achọghị, ma ọ bụ mmebi n'ihi ọkụ eletrik ma ọ bụ ọdịda ndị ọzọ na-atụghị anya ya. Ma ọ bụ mee ka ha kwụsị ịntanetị dị ka o kwere mee.
Site n'oge ruo n'oge na-enyocha ngwa na ndọtị arụnyere na ngwaọrụ ndị eji.
Ohere iji sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ mmemme sọftụwia bụ n'efu ma mepee. Ọ bụrụ na, ọ bụrụ na ịchọrọ iji Sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ mmemme nke Software ma ọ bụ nke emechi, nwee ohere iji ihe izizi na ikikere akwụ ụgwọ ha. Zere iji mmemme gbawara agbawa ma ọ bụ mmemme na-enweghị ntụkwasị obi na-emebi (ịgbawa) ikike ha.
Anyị ga-eburu n'uche na njikọ kachasị ike na usoro nchedo bụ onwe ya, ma ọ bụ ndị na-eji ikpo okwu ma ọ bụ ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na anyị echefughị ​​ya, anyị ga-enweworị ọkara ọrụ arụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa iji mata nke ọ bụla n'ime ihe dị mkpa nke «Seguridad Informática», na anyị ga-eme n'otu n'otu na mkpokọta, iji chebe onwe anyị na ndị ọzọ, n'ụbọchị ndị a nke oke nchekwa na ntanetị.
Ka anyị kpachara anya na inwe obi abụọ na njem anyị kwa ụbọchị, ebe ọ bụ na ezigbo enyo na oge nwere ike ịchekwa anyị iwe na, ikekwe, oge na ego. Chetakwa, na Ọ dị mkpa iji ọhụụ na usoro ọhụụ dị mma na egwu na-eyi egwu anyị «Seguridad Informática», iji gbalịa izere ha ma ọ bụ itinye ihe ngwọta kachasị dị irè.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ isiokwu ndị ọzọ metụtara «Seguridad de Información», «Seguridad Informática», «Ciberseguridad» y «Privacidad» y «Software Libre» na blọọgụ anyị Anyị na-akwado ndị na-esonụ gara aga posts: Nkeji edemede 1, Nkeji edemede 2, Nkeji edemede 3, Nkeji edemede 4 y Nkeji edemede 5.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Ndụmọdụ Nchebe Kọmputa maka Onye Ọ Bụla Oge Ọ Bụla, Ebe Ọ Bụla
HarmonyOS, ikpo okwu mepere emepe maka ngwa oru obula